Wararka Suuqa Ciyaaraha: Rudiger, Botman, Trippier, Christensen, Barbosa, Maitland-Niles
HomeWarka Xiisaha LehWararka Suuqa Ciyaaraha: Rudiger, Botman, Trippier, Christensen, Barbosa, Maitland-Niles
January 4, 2022 Warka Xiisaha Leh, Suuqa kala iibsiga, Wararka Ciyaaraha, Wararka Wargeysyada 0
Madrid, Paris St-Germain, Bayern Munich iyo Juventus ayaa dhamaantood wadahadalo la furay wakiilada Antonio Rudiger oo ku saabsan heshiis horudhac ah oo bishaan laga gaarayo 28 jirka daafaca uga ciyaara kooxda Chelsea , kaasoo heshiiskiisa Chelsea uu dhacayo xagaaga. (Sky Sports)
Lille ayaa u sheegtay Newcastle in daafaca dhexe ee reer Holland Sven Botman, oo 21 jir ah, uusan iib ahayn ka dib markii ay kooxuhu ka wada hadleen qiimaha ku kacaya 30 milyan ginni. (Telegraph)
Laakiin Newcastle ayaa horumar ka samaysay wadahadaladii ay Atletico Madrid kula soo saxiixatay daafaca reer England ee Kieran Trippier oo 31 jir ah xilli ay qarka u saaran yihiin in ay ku heshiiyaan lacag dhan 25 milyan gini. (Express)
Newcastle ayaa qarka u saaran inay kula tartanto Lyon saxiixa weeraryahanka Zenit St Petersburg iyo Iran ee Sardar Azmoun, 27. (Mail).
Wadahadaladii qandaraas kordhinta ee Chelsea ee Andreas Christensen ayaa mar kale hakad galay, iyadoo Barcelona ay xiiseyneyso inay Janaayo u dhaqaaqdo daafaca Danmark, oo 25 jir ah, kaasoo qandaraaskiisu dhacayo xagaaga. (Gianluca di Marzio)
Weeraryahanka Belgium Romelu Lukaku, oo 28 jir ah, ayaa ku wargeliyay Thomas Tuchel inuusan qorsheyneynin inuu ka tago Chelsea inkastoo uu sheegay “in uusan ku faraxsanayn” kooxda wareysi uu siiyay Sky Italia.(Times)
West Ham ayaa wadahadalo kula jirta weeraryahanka reer Brazil Gabriel Barbosa, oo 25 jir ah, kana tirsan Flamengo . (Sky Sports)
Roma ayaa soo gudbisay dalab ay ku dooneyso inay ku soo qaadato ciyaaryahanka khadka dhexe ee England Ainsley Maitland-Niles, oo 24 jir ah, amaah ay kaga soo qaadato Arsenal ilaa dhamaadka xilli ciyaareedka, iyadoo ikhtiyaar ay ku iibsan karto xagaaga. (Sport)
Daafaca midig ee Scotland Nathan Patterson, oo 20 jir ah, ayaa lagu wadaa inuu tijaabada caafimaadka u maro Everton ka dib markii Rangers ay aqbashay dalabkii ugu horeeyay ee 12 milyan ginni, kaasoo lagu kordhin karo 16 milyan ginni. (FootballInsider)
AC Milan ayaa wadahadalo kula jirta ciyaaryahanka khadka dhexe ee Portugal Renato Sanches, oo 24 jir ah, kana yimid Lille . (Calciomercato)
Weeraryahanka Uruguay Luis Suarez, oo 34 jir ah, ayaa doonaya inuu ka tago Atletico Madrid marka uu qandaraaskiisu dhaco xagaaga, waxaana uu rajeynayaa inuu dib ula midoobo weeraryahanka Paris St-Germain ee Argentina Lionel Messi, oo 34 jir ah, Marka uu ku biirp horyaalka MLS ee Inter Miami . (El Nacional)
U dhaqaaqida Alvaro Morata ee Barcelona waa “95% iyadoo heshiis uu horay ula gaaray Juventus, halkaasoo weeraryahanka Spain uu amaah ku joogo . (AS)
Barcelona ayaan wax kulan ah la qorshayn xiddiga garabka uga ciyaara xulka qaranka France ee Ousmane Dembele inkasta oo 24 jirkan uu heshiiskiisu dhici doono xagaagan isaga oo aan wali go’aan ka gaadhin in uu aqbalayo dalabka cusboonaysiinta kooxda. (AS)
Kubad sameeyaha Brazil Philippe Coutinho, oo 29 jir ah, ayaa u sheegay Barcelona inuu doonayo inuu ka tago kooxda bishaan. (Sport)
Bournemouth ayaa ogolaatay heshiis ay kula soo saxiixaneyso daafaca midig ee Manchester United Ethan Laird, iyadoo 20 jirka reer England uu qeybtii hore ee xilli ciyaareedka amaah ku qaatay kooxda ay xafiiltamaan Championship ee Swansea City . (FootballInsider)